1 Mpanjaka 14 - Ny Baiboly
1 Mpanjaka toko 14
Tenin'Iaveh fanamelohana an'i Jeroboama - Ny nahafatesan'i Jeroboama - Ny fanjakan-dRoboama - Tafik'i Sesaka mpanjakan'i Ejipta.
1Tamin'izany andro izany, dia nandraiki-narary Abià zanak'i Jeroboama, 2ka hoy Jeroboama tamin'ny vavy: Raha sitrakao, mitsangana ka manovà endrika, mba tsy ho fantatra ho vadin'i Jeroboama hianao, dia mankanesa any Silao. Indro fa ao Ahiasa mpaminany, ilay nilaza tamiko ny hanjakako amin'ity firenena ity. 3Mitondrà mofo folo sy mofomamy ary tantely iray tavoara, dia midira ao aminy, fa hambarany aminao izay tsy maintsy hahazo ny zaza. 4Dia nanao araka izany ny vadin'i Jeroboama, niainga izy, nankany Silao, dia niditra tao an-tranon'i Ahiasa. Tsy nahajery intsony Ahiasa fahizany, fa efa nanjavona azon'ny fahanterana ny masony.
5Efa nilazan'ny Tompo anefa Ahiasa, nataony hoe: Indro tamy ny vadin'i Jeroboama mba hahazo teny indraim-bava aminao ny amin'ny zanany, fa marary izy, ka izao sy izao no holazainao azy. Hody ho hafa izy rahefa tonga. 6Nony ren'i Ahiasa ny fingadongadon'ny tongony, ilay nandingana ny varavarana iny izy, dia hoy izy: Mandrosoa, ry vadin'i Jeroboama, nahoana hianao no mody ho olon-kafa? Voatendry hitondra hafatra mafy aminao aho. 7Mandehana lazao amin'i Jeroboama hoe: Izao no lazain'ny Tompo Andriamanitr'Israely: Nanandratra anao avy amin'ny vahoaka aho, ka nanangana anao ho filohany amin'Israely vahoakako. 8Nendahako tamin'ny tranon'i Davida ny fanjakana, ka nomeko anao. Kanjo hianao tsy mba nanao tahaka an'i Davida mpanompoko, izay nitandrina ny didiko sy nanaraka ahy tamin'ny fony rehetra, ary tsy nanao afatsy izay mahitsy eo imasoko; 9fa nanao ratsy mihoatra izay talohanao rehetra hianao, andriamani-kafa sy sarin-javatra anidina no lasa nataonao hampahatezitra ahy, fa izaho kosa nailikao any ivohonao! 10Noho izany, indro kosa aho hitarika ny loza ho amin'ny tranon'i Jeroboama, haringako avokoa ny lehilahy izay an'i Jeroboama, na ny andevo na ny olona afaka, amin'Israely, hataoko hoatra ny famafa diky ny famafa ny tranon'i Jeroboama mandra-pahalevony tsy misy intsony. 11Ka ny tamingan'i Jeroboama maty an-tanàna hohanin'ny alika; ary izay maty an-tsaha hohanin'ny voro-manidina; satria efa niteny Iaveh. 12Ary mitsangàna hianao, ka modia any an-tranonao, ary raha vao miditra ao an-tanàna ny tongotrao, dia ho faty ny zaza. 13Hitomany azy Israely rehetra, dia halevina izy, satria izy irery no mba tamingan'i Jeroboama ho voapetraka am-pasana, satria izy irery no tamingan'i Jeroboama nahitana soa vitsivitsy teo imason'ny Tompo Andriamanitr'Israely. 14Ary Iaveh hanangana mpanjaka amin'Israely, izay handringana ny taranak'i Jeroboama, amin'izany andro izany. 15Adre! Sahady lahy! Hataon'ny Tompo toy ny fihozongozon'ny volotara ao anaty rano, no famely an'Israely; hotsoahany amin'ity tany soa nomeny ny razany ity Israely, ka haeliny any an-dafin'ny ony, satria efa nanao aseraha ho azy izy, ka nampahatezitra an'ny Tompo. 16Hanolotra an'Israely izy noho ny fahotan'i Jeroboama, izay nataon'ny tenany sy izay nampanaoviny an'Israely.
17Dia nitsangana ny vadin'i Jeroboama ka niainga nandeha izy, dia tonga tany Tersa. Ilay nandingana ny tokonam-baravaran-trano iny izy, dia maty ny zaza. 18Nalevina izy ary nitomanian'Israely rehetra, araka ny tenin'ny Tompo, izay nolazainy tamin'ny alalan'i Ahiasa mpaminany mpanompony.
19Ny sisa tamin'ny zavatra nataon'i Jeroboama, dia ny niadiany sy ny nanjakany, indro efa voasoratra ao amin'ny bokin'ny Tantaran'ny mpanjakan'Israely.
20Roa amby roapolo taona no andro nanjakan'i Jeroboama, dia nodimandry any amin'ny razany izy. Ary Nadaba zanany no nanjaka nandimby azy.
21Roboama zanak'i Salomona nanjaka tamin'i Jodà. Efa iraika amby efapolo taona izy vao nanjaka, ary fito ambin'ny folo taona no nanjakany tao Jerosalema, tanàna nofidin'ny Tompo tamin'ny fokon'Israely rehetra, hametrahana ny anarany; Naama Amonita no anaran-dreniny.
22Nanao izay ratsy teo imason'ny Tompo Jodà, ka nampahasaro-piaro azy tamin'ny fahotana nataony, mihoatra noho izay nataon'ny razany. 23Fa nanorina fitoerana avo ho azy koa izy ireo, mbamin'ny tsangam-bato sy aseraha teny ambonin'ny tanety avo rehetra sy teny ambany hazo maitso rehetra teny. 24Efa nisy hatramin'ny manolo-tena ho mpijangajanga aza tamin'ny tany. Dia narahiny avokoa ny fahavetavetan'ny firenena noroahin'ny Tompo teo anoloan'ny zanak'Israely.
25Tamin'ny taona fahadimin'ny nanjakan-dRoboama, dia niakatra namely an'i Jerosalema Sesaka, mpanjakan'i Ejipta. 26Nobaboiny ny rakitry ny tranon'ny Tompo sy ny rakitry ny tranon'ny mpanjaka, dia lasany daholo. Nalainy avokoa ny ampinga volamena rehetra nataon'i Salomona. 27Ary ampinga varahina no nataon-dRoboama mpanjaka solon'ireny, ka nataony teo an-tanan'ny lehiben'ny mpihazakazaka izay miambina ny fidirana amin'ny tranon'ny mpanjaka. 28Ka isaky ny mankao an-tranon'ny Tompo ny mpanjaka, dia nentin'ny mpiambina izany, vao naveriny ho any an'efitranon'ny mpihazakazaka indray.
29Ny zavatra sisa nataon-dRoboama, mbamin'izay rehetra vitany, moa tsy efa voasoratra ao amin'ny bokin'ny Tantaran'ny mpanjakan'i Jodà? 30Niady mandrakariva Roboama sy Jeroboama. 31Ary nodimandry any amin'ny razany Roboama, ka nalevina tao akaikin'ny razany tao an-tanànan'i Davida. Ny anaran-dreniny dia Naamà Amonita, ary Abiama zanany lahy no nanjaka nandimby azy. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.3385 seconds